Website အတွက် Live လွှင့်သင့်သလား - Blog
Home /Website အတွက် Live လွှင့်သင့်သလား
ကျွန်တော်အပါအဝင် လူတော်တော်များများက လုပ်ငန်းအတွက် Live တွေလွှင့်တာကို ကြည့်ဘူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ကျွန်တော်လည်း Live ကို အနည်းအများလွှင့်ဘူးပါတယ်။ ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ Website အတွက် Live လွှင့်သင့်သလားဆိုတာပါပဲ။
အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်တော့ လူတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တာကိုကြည့်ကြတာပါပဲ။ ကမ္ဘာ့ဖလားတောင် တိုက်ရိုက်လွှင့်နေသေးတာ။ ကျွန်တော်တို့လည်း လွှင့်လို့ရကြတာပဲ.. လွှင့်ကြပေါ့.. ဒါပေမယ့် အကျိုးရှိ/မရှိဆိုတာကတော့ စဉ်းစားသင့်တာပေါ့.
ကောင်းခြင်းကိုပဲအရင်ပြောလိုက်ကြရအောင်။ Live လွှင့်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာက ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို လူတွေပိုစိတ်ဝင်စားလာမယ်ဗျာ။ ဥပမာ- လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ကြေငြာမယ်ဆိုပါစို့။ ဒီအတိုင်းကြေငြာမယ်ဆိုရင်တော့ boost လုပ်ပြီးတော့မှ ကြေငြာဖို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် Live လွှင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Fb ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ youtube ကပဲဖြစ်ဖြစ် အများကြည့်ရှု့နိုင်အောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သီးခြားသွားပြီးကြော်ငြာနေစရာမလိုပါဘူး။
ကြော်ငြာစရာမလိုတဲ့အပြင်ကို လူတိုင်းက လူကြီးမင်းလွှင့်နေတုန်းမှာပဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ပြီး ပြန်ကြည့်ဖို့အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရတာကို လူတွေက ပိုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ အဲဒီတော့ Live လွှင့်ရင် လူတွေက ပိုကြိုက်ပါတယ်။
Live လွှင့်သင့်တဲ့ Content များ
Live လွှင့်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် အဆင်ပြေမယ့် Content တွေကို စဉ်ထားသင့်ပါတယ်။ ပုံမှန် နေကောင်းလား ထမင်းစားပြီးပြီလားဆိုတာ Live လွှင့်သင့်တဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီထက်ပိုကောင်းတာကတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုသူတွေကို အကျိုးရှိစေမယ့် အရာမျိုးဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။​ ကိုယ်က မိတ်ကပ်ရောင်းတယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းပေါ့။ သို့တည်းမဟုတ် တခြားကုန်ပစ္စည်း ဥပမာ- ဘောပင်ရောင်းတယ်ဆိုရင်. Caligraphy ဆွဲနည်း၊ ကနုတ်ရေးနည်းလိုဟာမျိုးတွေကို ပြသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ content မရှိဘူးဆိုရင်လည်း အနိမ့်ဆုံးက ဒါမျိုးလေးက ဒါတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုး Live လွှင့်သင့်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ကို ဘောင်ချာစုတ်ဖို့အတွက် Live လွှင့်တာမျိုးကတော့ မလုပ်သင့်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင်းထုတယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှတော့ ပေါ်တင် ဘောင်ချာ စုတ်တာတွေက နေ့တိုင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့အရာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကို Live လွှင့်လိုက်ရင်တော့ နောက်ပိုင်း အကျိုးဆက်တွေက ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နတ်မှ မကယ်နိုင်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက အကျိုးမရှိတာကို မလွှင့်ပါနဲ့။ အစားအသောက်ကို Live လွှင့်တာကိုလည်း အားမပေးပါဘူး။ အစားအသောက်ကို ချက်ပြုတ်တာ၊ သို့မဟုတ် မြည်းစမ်းတာကို လက်ခံပေမယ့် သွားလေရာလုပ်လေရာကို Live လွှင့်တာကိုတော့ အားမပေးပါဘူး။ အဲဒီတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ချင့်ချိန်ပြီး Live လွှင့်သင့်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာ Live လွှင့်တာက ကောင်းပါတယ်။ သို့ပေတည့် ကောင်းတာလေးတွေရွေးလွှင့်ပြီး လူတိုင်းကို စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာဖြစ်အောင် လုပ်တာက အရာအားလုံးအတွက် ကောင်းပါတယ်ဆိုတာလေးကို အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။